Cofttek deeq waxbarasho - Kaabayaasha Cofttek.
Cofttek Deeqda waxbarasho
Qof kastaa wuxuu rabaa shaqo wanaagsan iyo waxbarasho ka caawin doonta inay sii fogaan. Si kastaba ha noqotee, dad badani waa inay ka tanaasulaan shaqadooda iyo yoolalkooda waxbarasho sannadba sannadka ka dambeeya. Cofttek way ogtahay sida ay muhiimka u tahay in waxbarashadu sax tahay, waana sababtaas awgeed waxaan u caawinaa sidii aan aqristeyaasheena wax ugu bari lahayn waxyaabaha ku saabsan Kaabisyada cuntada iyo dib-u-eegistayada iyo talooyinkeena.
Deeqda-waxbarasho ee 'Cofttek Scholarship' waa hormar cusub oo aan ku faaneyno inaan ku dhawaaqno. Waa deeq-lacageed $ 2000 oo sanadle ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo ardayda inay ku guuleystaan ​​hamigooda waxbarasho iyo shaqo. Deeqdan waxbarasho waxaa la siin doonaa hal arday sanad walba si looga caawiyo bixinta kharashyada waxbarashada. Waxaan raadineynaa inaan labalaabno tirada deeqda waxbarasho ee sanadka soo socda.
Immisa lacag ah oo loogu talagalay deeq-waxbarasho?
Deeqdan waxbarasho ayaa siin doonta ardayga $ 2000 in lagu bixiyo kharashka waxbarashada. Waa deeq waxbarasho oo keliya mana la cusbooneysiin karo gabi ahaanba. Waxaa loo diri doonaa xafiiska maaliyadda.
Waxaan raadineynaa arday si dhab ah u adeegsan kara maaliyaddii aan bixinay. Ardayda qalin jebisa iyo kuwa dhigta shahaadada koowaad ayaa codsan kara, illaa inta ay ka qoran yihiin wakhti buuxa oo dugsiga qalin jebiyey ama kulliyad la aqoonsan yahay. Celceliska ugu yar ee GPA (Celceliska Darajada Fasalka) si loo codsado deeq-waxbarasho waa 3.0
Sideed u Dalban Kartaa
Si fudud ayaad u dalban kartaa deeqdan waxbarasho. Waxaa loogu talagalay inay fududaato in lagu qalmo oo loo dalbado. Tiro kooban oo arday ah ayaa codsan kara, hal arday oo kaliya ayaa awoodi kara inuu guuleysto.
Waa tan sida aad u dalbato:
Ku billow qoritaanka qormooyin ka kooban 500 oo erey ama in ka badan oo ku saabsan “Dheer dheeri ah isticmaal ka caan ah abid”. Waxaad dib u eegi kartaa mid ka mid ah koorsooyinka aad dhameysay waxaadna u isticmaali kartaa si tafaasiil ah sida ay kaaga caawin doonto inaad sare u qaaddo xirfaddaada. Qoraalku wuxuu u baahan doonaa in la soo gudbiyo Diisambar 31st, 2020.
Waxaad u baahan doontaa inaad u dirto dalabkaaga [emailka waa la ilaaliyay] Hubso inay kujirto qaab Microsoft Word ah. Adeegso cinwaanka emaylkaaga waxbarasho (edu) oo keliya. Haddii aad ku soo gudbiso dalabkaaga PDF ama Google Doc, lama aqbali doono.
Foomka soo gudbinta waa inay kujirtaa macluumaadka soo socda: magacaaga, lambarka taleefankaaga, magaca jaamacaddaada iyo cinwaanka emaylkaaga.
Qoraalku waa inuu ku qornaadaa ereyadaada oo uu qiimo ugu lahaadaa akhristaha.
Khayaanada kasta waxay ku dambayn doontaa in soo gudbintaada isla markaaba la diido.
Kaliya soo bixi macluumaadka kor lagu faahfaahiyay.
Qoraalkaaga waxaa lagu xukumayaa hal-abuurnimadiisa, fikirkiisa iyo qiimeyntiisa.
Soo gudbinta kasta waxaa gacanta lagu fiiriyaa oo Janaayo 15, 2021, guuleystaha waxaa lagu shaacin doonaa oo lagu ogeysiin doonaa emayl.
Qaanuunkayaga Khaaska ah
Waxaan hubinnay inaan macluumaadka ardayga ee la wadaagi doonin, iyo in macluumaadka shaqsiyadeed oo dhan loo xafidayo isticmaalka gudaha oo keliya. Ma siin karno faahfaahin arday kasta dhinacyada saddexaad sabab kastoo jira, laakiin waxaan ilaashannaa xuquuqda aan u isticmaalno qodobbada naloogu soo gudbiyey si kasta oo aan rabno. Haddii aad u soo gudbiso maqaal Cofttek, waxaad na siisaa dhammaan xuquuqaha waxa ku jira, oo ay ku jiraan lahaanshaha waxyaabaha la sheegay. Tani waa run haddii gudbintaada loo aqbali karo guuleystaha iyo in kale. Cofttek.com waxay xaq u leedahay inay adeegsato shaqooyinka la soo gudbiyay oo dhan si loo daabaco maadaama ay u aragto inay ku habboon tahay iyo meesha loo arko inay ku habboon tahay.